News Collection: 'मेलिना नै राम्री'
'मेलिना नै राम्री'
सानैदेखि फिल्म हेर्न भनेपछि हुरुक्कै हुने डिक खड्कालाई उमेर छिप्पिँदै गएपछि फिल्मी धुनले यसरी रिंग्यायो कि उनी मोरङबाट भागेर काठमाडौं आए । पहुँचवाला आफन्तका कारण जागिर खाने थुप्रै राम्रा अवसर पनि लत्याए उनले । उनी फिल्म लाइनमा कसरी छिर्ने भन्ने चक्करमा थिए । यस्तै चक्कर काट्दा उनले ०४४ मा अम्बर अक्बर नामक बंगाली फिल्ममा लाइटम्यानको काम गर्ने मौका पाए । अनि त के चाहियो उनलाई ? केही वर्ष लाइटम्यानकै काम गरे । काँधका छाला पनि फाले । बिस्तारै उनको ध्यान गयो-क्यामेरातिर ।
क्यामेरा-टेकर भएर काम गर्दागर्दै उनी पनि अभ्यस्त भए । अनि उनले ०५० मा तुलसी घिमिरेको रहर फिल्म खिचे । पूरै फिल्म आफूले खिचे पनि निर्देशक घिमिरेले सो फिल्मको छायांकारमा आफ्नै नाम राखे । अनि मन कुँडियो रे उनको । ँउहाँमा शोषण प्रवृत्ति हावी भयो । पूरा फिल्म मैले खिचेँ, तर उहाँले रहरको छायांकारमा आफ्नै नाम राख्नुभयो,’ त्यसपछि तुलसी क्याम्प छोडेको बताउँदै डिकले भने, ँपछि ०५१ मा बलिदान खिच्न पनि बोलाएका थिए । त्यसैवेलामा मैले आफ्नो विरानो फिल्म पाएँ । त्यहाँबाट म क्यामेरामेन भएँ ।’ आफ्नो विरानोबाट क्यामेरामेन बनेका डिकले त्यसपछि अहिलेसम्म ४४ वटा फिचर फिल्म र त्यत्तिकै संख्यामा डिजिटल तथा डकुमेन्ट्री फिल्म खिचिसकेका छन् ।
आफ्नो मामा निर्माण-नियन्त्रक मेघराज पौडेलको सिफारिसमा लाइटमेनबाट करिअर सुरु गरेका उनी क्यामेरामेन हुँदै निर्मातासमेत बनेका छन् । उनले हालै मजबुर नामक फिल्म निर्माण गरेका छन् । फिल्म वृत्तमा कुशल क्यामेरामेनका रूपमा चिनिने डिकले अहिलेसम्म थुप्रै हिरोइनलाई रिलमा कैद गरिसकेका छन् । यी क्यामेरामेनको क्यामेराको ँभ्यु फाइन्डर’ बाट कुन हिरोइन कस्तो देखिन्छन् त ?
अहिलेसम्म थुप्रै हिरोइनसँग काम गरियो । पुराना पुस्ताका गौरी मल्ल, करिश्मा मानन्धर, कृष्टि मैनाली, पूजा चन्द, जल शाह, मेलिना मानन्धर, निरुता सिंहदेखि लिएर अहिलेका अरुणिमा लम्साल, ऋचा घिमिरे, रेजिना उप्रेती तथा भर्खरै आएकी अनुष्का ढकालसम्म काम गरेको छु । अपशोच भनौँ, यात संयोग नमिलेको, अहिलेसम्म रेखा थापा र झरना थापासँग काम गर्न पाएको छैन ।
मैले सँगै काम गरेका हिरोइनमध्ये हरेक कोणबाट मेलिना मानन्धर राम्री लाग्छिन् । जुन एंगलबाट खिचे पनि उनी राम्री देखिन्छिन् । मेलिना सपना फिल्ममा कोरस डान्सर थिइन् । त्यतिवेला म सहायक क्यामेरामेन थिएँ । उनीसँग छहारी, दाँैतरीलगायतका फिल्ममा काम गरियो । उचाइ, फिगर, अनुहारको बनोट सबै कुरामा उनी राम्री छिन् । दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ सुन्दरी भएर पनि उनले पाउनुपर्ने सफलता पाइनन् ।
पहिलाकी हिरोइन कृष्टि मैनालीसँग मैले चिनो, सपना र तृष्णा फिल्ममा काम गरेँ । डान्स नसिके पनि रिदममा ट्याप्पै पक्डन सक्ने क्षमता थियो । एक्टिङ, अदामा पनि पर्फेक्ट थिइन् उनी । जस्तो डे्रस लगाए पनि सुहाउने । तर, उनी धेरै काली भएकाले डि-मेकअप अनिवार्य हुन्थ्यो । जसकारण उनलाई सुन्दर देखाउन धेरैबेर मेकअप गर्नुपथ्र्याे ।
अर्की अभिनेत्री पूजा चन्दसँग हाम्रो जिन्दगानी, मनको टुक्रालगायतका केही फिल्ममा काम गरँे । काममा मिहिनेती भए पनि उनको गाला ठूलो देखिनुका साथै क्यामेरामा उनी उमेरभन्दा छिप्पड देखिन्थिन् । टाउको ठूलो भएका कारण पूजाको अनुहार पनि ठूलो देखिन्थ्यो । बाहिर हेर्दा त ठीकै हो, तर फिल्ममा भने उनलाई राम्री देखाउन निकै मिहिनेत गर्नुपर्दथ्यो ।
अभिनय बुलन्द गर्थिन् जल शाह । तर, उनको अनुहार बच्चाको जस्तो आउँथ्यो । उनी निकै सन्की थिइन् । जसकारण उनीसँग काम गर्न जोकोहीलाई गाह्रो हुन्थ्यो । गौरी मल्लसँग केही फिल्ममा सँगै काम गरियो । मेरो नजरमा गौरी बुलन्द अभिनय गर्ने अभिनेत्री हुन् । क्यामेरामा उनको गाला ठूलो देखिन्छ । अभिनय राम्रो भए पनि उनले रूपले मार खाइन् । करिश्मा मानन्धर खुबी भएकी हिरोइन हुन् । अभिनय, नृत्यमा उनी अब्बल छिन् । तर, क्यामेरामा उनी अलि होची देखिन्छिन् । आफ्नो काममा पर्फेक्ट भए पनि उनी अलि मुडी छिन् । जसकारण यसबाट उनी आफँैलाई घाटा भइरहेको हुन्छ ।
मेरो नजरमा निरुता सिंह हिरोइन लाग्दिनन् । मैले उनीसँग दक्षिणा, रहर र मितज्यू फिल्ममा काम गरेको छु । अभिनय राम्रो भए पनि डान्स कमजोर छ उनको । उचाइ कम छ उनको । शरीरमा कडापन छ । निरुता न त बाहिर न त क्यामेरामा राम्री देखिन्छिन् । मैले उनमा हिरोइनमा हुनुपर्ने सुन्दरता देख्दिनँ । मैले विपना थापासँग तिम्रो माया ९९ मेरो माया १००, ठूले, मंगलसूत्रलगायतका फिल्ममा काम गरेँ । डान्स राम्रो भए पनि अनुहारभरि पिम्पल्स हुनाले उनलाई सुन्दर देखाउन निकै गाह्रो हुन्थ्यो । मेकअप धेरै गर्नुपर्ने जसकारण फेसमा फिलिङ्स नआउने । काममा भने सिन्सिएर थिइन् उनी ।
सज्जा मैनालीसँग हाम्रो जिन्दगानी, भाग्यविधाता, मनको टुक्रालगायतका फिल्ममा काम गरेँ । उनी अभिनयचाँहि गर्ने । तर, उनको शारीरिक बनोट नै कता के नमिलेको जस्तो देखिने । उचाइ पनि कम । क्यामेरामा उनी उमेरभन्दा बढी देखिन्थिन् । खासमा उनी हिरोइनजस्तो कहिल्यै लागेन मलाई । अर्की अभिनेत्री पूजना प्रधानको पनि बडी स्ट्रक्चर कता-कता नमिलेकोजस्तो लाग्छ मलाई । उनीसँग पाण्डव, पापी मान्छे २, तिर्खालगायतका फिल्ममा काम गरेँ । उनको शरीर केटा मान्छेको जस्तो देखिन्छ । हिरोइनमा हुनुपर्ने लचकता भेटिँदैन । नाक पनि अलि नमिलेको देखिन्छ । नाँच्न सिपालु भए पनि अभिनय खासै गतिलो छैन ।
अर्की अभिनेत्री युना उप्रेतीसँग मैले अहिलेसम्म एउटा मात्रै फिल्म पहिलो पहिलो मायामा काम गरेको छु । क्यामेरामा उनको अनुहार सानो र लाम्चो आउँछ । आँखा पनि भित्र पसेको देखिन्छ । उनलाई टप लाइटमा खिच्नुपर्दा निकै समस्या हुन्छ । आँखामा चस्मा लगाएकोजस्तो देखिन्छ । जसकारण उनलाई धेेरै मेकअप गर्नुपर्छ । उचाइ भए पनि क्यामेराबाट हेर्दा पनि हिरोइन
लाग्दैनिन् उनी । अहिले चलिरहेका र मैले सँगै काम गरेका हिरोइनमध्ये ऋचा घिमिरे धेरै काली छिन् । उनलाई राम्री देखाउन पनि प्रशस्तै मेकअप गर्नुपर्छ । लुक सेक्सी देखिए पनि डे्रस अप सुहाउँदैन उनलाई । शारीरिक बनोट च्याप्टो खालको देखिन्छ उनको । अभिनय र डान्स ठीकै गरे पनि उनी मुडी र सन्की छिन् । उनले आफ्नो यो बानी सुधार्नुपर्छ । अरुणिमा लम्साल मिजासिली र मिलनसार लाग्छ मलाई । उनीसँग यस्तै रहेछ जिन्दगानी र अर्काे एउटा फिल्ममा काम गरेको छु । उनको फिगर ठीक छ । तर, बोल्दा उनको अनुहार अलि बांगोजस्तो देखिन्छ ।
रेजिना उप्रेतीसँग सन्न्यास, निशानालगायतका फिल्ममा काम गरेको छु । हेर्दा उनी राम्री देखिन्छिन् । फिगर राम्रो छ । अभिनय र डान्समा म उनलाई औसत मान्छु । तर, उनको निधार खुम्चिन्छ । उनले यो कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ।
अहिले आएकी नयाँ हिरोइन, अनुष्का ढकाल रूपमा राम्री छिन् । मेरो फिल्म मजबुरमा राम्रो काम गरेकी छिन् । तर, उनी अलि पातली छिन् । उनले आफ्नो डान्सका साथै बोलीवचन तथा व्यवहार
निकै सुधार्नुपर्छ ।